Ukuphupha ngokukhusela Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Uhlala efumaneka kwimidlalo bhanyabhanya yothando yaseHollywood yakudala: indoda enobugorha ebeka ubomi bakhe emngciphekweni wokukhusela owasetyhini amthandayo. Iqhawe aloyiki intlungu okanye ingozi, uyamelana nobubi nje ukuba azi ukuba umntu osentliziyweni yakhe ukhuselekile kwaye ukhuselekile.
Umnqweno kunye nomnqweno wangaphakathi wokunceda umntu kudla ngokubhekiswa kuye njengokukhusela. Eli gama lihlala linxulunyaniswa neempawu zobudoda kwaye mhlawumbi ngokwesiko ngokwesimo sendlela yokuziphatha. Indoda kufuneka ikhusele umntu obhinqileyo, kuba kusathethwa ukuba abasetyhini ngabesini esibuthathaka kwaye ke ngoko baxhomekeke kuncedo nenkxaso yendoda. Kwanabantu abangenakuzikhusela, njengabantwana okanye abantu abadala, bakhuselekile ngethuku; Ngendlela efanayo, iyafana kunye nezilwanyana. Eyona inkulu ikhusela incinci, ephezulu ikhusela esezantsi.
Isidingo sokukhusela umntu osweleyo kwaye odinga uncedo lwethu, ke, kuye kwabakho kubantu abaninzi kwasekuzalweni, nokuba bayindoda okanye babhinqileyo. Umama uya kuhlala esenza konke okusemandleni ukukhusela usana lwakhe, utata ukhusela umntwana wakhe, inja ime phambi kwenkosi yayo ikhusele.
Singaphupha nokukhusela umntu. Kodwa ingaba utoliko lweli phupha lulutolika njani olu phawu?
1 Uphawu lwephupha «khusela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «khusela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «khusela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «khusela» - ukutolikwa ngokubanzi
Iimeko zokuphupha apho injongo ikukukhusela umntu avele rhoqo el mundo kufana nephupha. Ukuba nguwe okhuselweyo ngomnye umntu, ukutolikwa kwephupha kukubona njengophawu oluqinisekileyo lwenye. ubudlelwane bothando okanye ubuhlobo obusondeleyo, obunika ukuphupha isikhokelo sokhuselo kwaye apho avunyelwe ukuba azive ekhuselekile kwaye ekhuselekile.
Ukuba ubona umntu okhuselekileyo ongathathi hlangothi ephupheni, njengomlindi wasebusuku, oku kufanekisela imbambano kubomi bokuvuka, malunga nesiphumo sephupha ekuthethwa ngalo alingaqinisekanga.
Ukuba umntu uziva eyingozi ephupheni, nokuba liyabonakala okanye alinangqondo kwaye limfiliba, kwaye ufuna ukuba umntu abe secaleni lokusikhusela xa kukho uhlaselo oluvela ngaphandle, owomeleleyo uzibonakalisa enamava afana nephupha. umnqweno umntu ophupha emva a ikhuselekile kunye nendawo esisigxina ebomini. Batyekele ekungazithembi kakhulu kwaye abasoloko befuna umntu osecaleni kwabo obanika imvakalelo yokuba nezinto zonke ziphantsi kolawulo kwaye banako ukutyeshela iingxaki zobomi. "Igxalaba elomeleleyo", umntu omi njengeqhalo "eliqinileyo" kwaye esinokuziva sikhuselekile kuye.
Nangona kunjalo, ayikokukhusela kuphela umntu kwimicimbi yamaphupha, isilwanyana ngamanye amaxesha kufuneka sikhuselwe okanye sihlangulwe engozini. Nabani na onceda isilwanyana unamazinga aphezulu obuchule ekuhlaleni. Umphuphi uyayiqonda indlela yokujongana nabantu, unokuvelana nabanye abantu, kwaye ngenxa yoko uyathandwa.
Ezinye iisimboli zamaphupha zinokuhamba ziye kumfanekiso wephupha "zikhusele": Umntu uzikhusela ngantoni? Mhlawumbi ngesambrela esisikhusela kwimvula nakwisaqhwithi, uphahla lwendlu olukhuselekileyo okanye ngesixhobo esikhusela ngaso omnye umntu ngesibindi ukukhusela ubomi babo? Banokuba zizinto ezincinci ezinomsebenzi okhuselayo obonakala ephupheni: iinkophe zikhusela amehlo ethu kwimizimba yangaphandle.
Ezi meko zamaphupha zinokuvela rhoqo kwilizwe lamaphupha kwaye zikwanikezela umphuphi ithuba, ngokutolikwa ngokuchanekileyo kwayo yonke imifanekiso yamaphupha ebonakala ephupheni, ukuhlalutya iphupha labo ngokukodwa kwaye kukhanyise onke amanqanaba emeko yephupha.ngokuchaneka okukhulu .
Uphawu lwephupha «khusela» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba ujonga uphawu lwephupha "khusela" kwindawo yokujonga kwengqondo, kuhlala kukho unxibelelwano olusondeleyo nomxholo osemva kwayo. Ukhuseleko lomntu. Ukuba ukhusela umntu ngokwakho kwaye ke uvakalise icala lakho lokukhathalela, oku kubonisa inxenye yobuntu enesidingo esingxamisekileyo sokuzikhusela kwiintlungu okanye iintlungu.
Ukuba, ngokuchaseneyo, iphupha likhuselwe ngomnye umntu ephupheni, ulwazi lubonakaliswa apha kwinqanaba lokungazi ukuba uhlala ekhuselwe ngamandla aphezulu kubukho bakhe njengomntu kwaye unokuqiniseka ngalo ngokuzithemba okupheleleyo .
Enye inkalo yokutolikwa kwephupha ngokwasemfanekisweni womfanekiso wephupha "ukukhusela" kuphakamisa umbuzo wokuba ingaba ngasemva kwesidingo sokukhusela umntu asingomnqweno na ulawulo izibiyeli. Ngokunokwenzeka kukho ukufana apha kunye nobomi bokwenyani bokuphupha, apho unokukhetha ngokungazi abantu ababuthathaka ukuba ubakhusele, kodwa kwinqanaba elinzulu ufuna imvakalelo yokuba nguwe olawulayo.
Nokuba ithuku elikhuselayo linokujika ngokukhawuleza libe sisifo esincedayo, apho umncedi ngokwakhe enengxaki yokungazithembi kwaye azama ukuhlawula oku ngokuzinikela kwakhe ngokungagungqiyo kwabanye. Nangona kunjalo, ngokwenza njalo, ayihoyi into yokuba ixhoba elityholwayo alifuni kukhuselwa kwaphela.
Ukuba uziva uphupha malunga neempahla njengokuphumla, kuba uziva ushushu kwaye ukhuselekile, amanqaku akho obuthathaka kunye nezinto ezisengozini zomphefumlo nazo zikhuselekile kwindalo esingqongileyo. Ngokufanelekileyo, kule minyaka idlulileyo, umntu ochaphazelekayo uphuhlise iqhinga lokuzibonakalisa kwilizwe langaphandle ngamandla amakhulu kunokuba enjalo. Ingubo yoboya efudumeleyo emaphupheni ibonakalisa ukulangazelela intuthuzelo, ukwanga kunye nenkuthazo.
Nabani na obalekela kwindawo yokuhlala elula ekhuselayo kwindawo ephupha, umzekelo, indlu, umqolomba okanye igloo, ngokutolikwa kwephupha ngokwengqondo. Kwanaxa kunzima ebomini, umntu akaphelelwa lithemba, kodwa ucinga ngokuzola kwakhe ngaphakathi.
Uphawu lwephupha «khusela» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha "khusela" umele ukusuka kwindawo yokujonga ukutolika kokomoya kwephupha. ukhuseleko kwindalo iphela noncedo lukaThixo.